You are here: Home Home Feysal Cumar Mushteeg (1940kii-2012ka)
Waa Qormo aan laba sannadood ka hor qoray oo aan dib u nakhtiimay si aynu u maamuusno sannad-guurada 2aad ee ka soo wareegtay geeridii naxdinta lahayd ee Macallin Feysal Cumar Mushteeg.Feysal waxa lagu aasay Hargeysa 21kii Sebtember, 2012kii.
20kii Bishii Sebtember 2012kii, ayaanu booqasho ku tagnay qolalka danbe ee yar yar ee cisbitaalka guud ee Hargeysa. Waxaanu u dan lahayn qolka 6aad oo safka hore ah oo uu deggenaa ama ku jirayba fannaankii caan-baxay ee Feysal Cumar Mushteeg. Afar ayaanu ahayn: Mustafe Kiiko, Baashe, wiilkayga Aw Yuusuf iyo aniga. Aw Yuusuf oo qolkiisa yaqaannay ayaa noogu hor degay. Soo-noqodkii uu soo socday waxaanu ka garannay, in Feysal laga saaray qolkii. Intii aanu aw Yuusufba na soo gaadhin, waxa qolkii bidix ka xigay ka soo baxay Cawil (Bulbul) oo macallin reer Hargeysa ah. Wuxu noo sheegay in la qaaday shalay oo ay u yimaaddeen rag ay ka mid ahaayeen Muuse Cali Faruur iyo Basbaas oo ka qayb-gelayay Bandhig-faneedka sannad walba bisha Oktoobar lagu qabto magaalada London. La-ye bas ayay ku sii qaadeen, ka dibna Berbera ayuu ku sakaraaday oo waa la soo celinayay. Tilifoonkii Muuse Cali Faruur ayaan garaacay, waxaana iga qabatay inantiisii oo ii sheegtay in ay maalintaa subaxnimadeedii dhoofayeen.
In uu Feysal Cumar Mushteeg dhakhtarka Hargeysa ku jiro waxaan ku ogaaday aniga oo magaalada Jubba ee Koonfurta Soodaan jooga badhtamihii bishii Ogos 2012kii. Maa daama ay Iiddii soo dhaweyd, Feysalna aan xarragadiisa ogaa weliba macawis-jacaylkiisii, yarkayga Aw Yuusuf ayaan u sheegay in uu macawis iyo cumaamad cusbayd oo guriga yaallay u geeyo shaadhna u sii iibiyo. Isaga ayaa ii sheegay in uu xanuunsanayo oo ay cisbitaalka isugu iman jireen fannaaniin ay ka mid ahaayeen: Maxamed Aadan Dacar, iyo Basbaas.
Feysal, hooyadii waxay ahayd Aamina Maxamed Bulxan. Dumarkii muddakarka ahaa ee Hargeysa ayay ka mid ahayd. Waxay saaxiibbo ahaan jireen Habar-yartay faadumo Cabdi Ibraahin oo ‘Dararamle’ hooyadii ahayd. Dhammaantood Ilaahay naxariistii Janno ha ka waraabiyo. Awowgii Maxamed Bulxanna (Cawar) wuxu ahaa gabayaa degellada Soomaaliyeed aad looga yaqaanno oo af-tahan ahaa. Gabayadiisa hal-ku-dhegga noqday waxa ka mid ah “Dal-dhammeeye”, oo uu ku bilaabay:
(La soco Qormada 2aad)